နတ်သမီးဥယျာဉ် - www.venus-garden.com
နတ်သမီးဥယျာဉ်သံစဉ် fm နားဆင်ရန်
အဖွဲ့ဝင် 326 ဦး
အဖွဲ့ဝင် 153 ဦး
အဖွဲ့ဝင် 103 ဦး
အဖွဲ့ဝင် 90 ဦး
အဖွဲ့ဝင် 83 ဦး
G.talk နှင့်facebook★♫ ♥…
အဖွဲ့ဝင် 70 ဦး
Android apk တောင်းဆိုရာ
အဖွဲ့ဝင် 64 ဦး
Android နဲ့ ပတ်သက်ချက်မျ…
အဖွဲ့ဝင် 63 ဦး
အဖွဲ့ဝင် 62 ဦး
ဂီတာ ဝါသနာရှင်များအတွက် …
အဖွဲ့ဝင် 59 ဦး
အဖွဲ့ဝင် 58 ဦး
အဖွဲ့ဝင် 54 ဦး
အဖွဲ့ဝင် 45 ဦး
အဖွဲ့ဝင် 42 ဦး
အဖွဲ့ဝင် 41 ဦး
အဖွဲ့ဝင် 36 ဦး
ကွန်ပျုတာနှင့် android တ…
အဖွဲ့ဝင် 35 ဦး
Loading… ဘလော့ ပို့(စ်)
သြဂုတ်လ 21, 2014 တွင် 12:08am အချိန် Khanth Gyii မှတင်ပြခဲ့ပါတယ်3မှတ်ချက်
သြဂုတ်လ 20, 2014 တွင် 11:30pm အချိန် မင်းယောင်္ကျား မှတင်ပြခဲ့ပါတယ်2မှတ်ချက်
သြဂုတ်လ 20, 2014 တွင် 11:26pm အချိန် မင်းယောင်္ကျား မှတင်ပြခဲ့ပါတယ်2မှတ်ချက်
သြဂုတ်လ 20, 2014 တွင် 11:19pm အချိန် မင်းယောင်္ကျား မှတင်ပြခဲ့ပါတယ်2မှတ်ချက်
သြဂုတ်လ 20, 2014 တွင် 11:19am အချိန် အလွမ်း ခ မှတင်ပြခဲ့ပါတယ်4မှတ်ချက်
သြဂုတ်လ 18, 2014 တွင် 5:52pm အချိန် ကျားထက်ဆိုး(ခ)လူချော မှတင်ပြခဲ့ပါတယ်2မှတ်ချက်
သြဂုတ်လ 18, 2014 တွင် 4:32pm အချိန် အလွမ်း ခ မှတင်ပြခဲ့ပါတယ်3မှတ်ချက်
အထူးမန်ဘာ လူဆိုတာ ဘယ်ကစ အထီး၊ အမ ဘယ်ကစ ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
သြဂုတ်လ 18, 2014 တွင် 11:00am အချိန် +!!♥♥lapyae♥♥ !!+ မှတင်ပြခဲ့ပါတယ်4မှတ်ချက်
သြဂုတ်လ 17, 2014 တွင် 7:42pm အချိန် ကျားထက်ဆိုး(ခ)လူချော မှတင်ပြခဲ့ပါတယ်2မှတ်ချက်
သြဂုတ်လ 17, 2014 တွင် 4:23pm အချိန် + !၉၆၉သစ်စာတော်+ !! မှတင်ပြခဲ့ပါတယ် 1 မှတ်ချက်
သြဂုတ်လ 16, 2014 တွင် 8:30pm အချိန် + !၉၆၉သစ်စာတော်+ !! မှတင်ပြခဲ့ပါတယ်2မှတ်ချက်
သေသွားတဲ့ ကွမ်းတောင်ကိုင်မလေးကို ပီယဆေးဖော်ခိုင်းစဉ် မဖဲဝါနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်သေသွားတဲ့ ကွမ်းတောင်ကိုင်မလေးကို ပီယဆေးဖော်ခိုင်းစဉ် မဖဲဝါနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်
သြဂုတ်လ 16, 2014 တွင် 5:00pm အချိန် zawhtetoo မှတင်ပြခဲ့ပါတယ်6မှတ်ချက်
သြဂုတ်လ 16, 2014 တွင် 11:30am အချိန် zawhtetoo မှတင်ပြခဲ့ပါတယ်4မှတ်ချက်
သြဂုတ်လ 16, 2014 တွင် 5:18am အချိန် နေလင်းရိပ် မှတင်ပြခဲ့ပါတယ်3မှတ်ချက်
သရဲခြောက်တဲ့ အိမ်ကို သတင်းသွားယူသည့် သတင်းထောက် သရဲ ကုတ်တာခံလိုက်ရတဲ့ ထူးဆန်းသည့်ဖြစ်ရပ်
သြဂုတ်လ 15, 2014 တွင် 7:00pm အချိန် zawhtetoo မှတင်ပြခဲ့ပါတယ်4မှတ်ချက်
အထူးဘလော့ဂါ ဘာမျူဒါတြိဂံ နှင့် ကမ္ဘာ့ရေသင်္ချိုင်းကြီးများ
သြဂုတ်လ 15, 2014 တွင် 4:55am အချိန် + ♥♥သရဲလေး♥♥ + မှတင်ပြခဲ့ပါတယ်4မှတ်ချက်
သြဂုတ်လ 14, 2014 တွင် 2:13pm အချိန် +!!●♥ မမုန်းသင့်သောကောင်မလေး+!♥● မှတင်ပြခဲ့ပါတယ်4မှတ်ချက်
သြဂုတ်လ 14, 2014 တွင် 2:02pm အချိန် +!!●♥ မမုန်းသင့်သောကောင်မလေး+!♥● မှတင်ပြခဲ့ပါတယ်5မှတ်ချက်
သြဂုတ်လ 14, 2014 တွင် 1:00pm အချိန် zawhtetoo မှတင်ပြခဲ့ပါတယ်3မှတ်ချက်
သြဂုတ်လ 14, 2014 တွင် 12:07pm အချိန် zawhtetoo မှတင်ပြခဲ့ပါတယ် 1 မှတ်ချက်
အားလုံး ကြည့်ရန် ဖိုရမ်တွင်းစာပေ
ကျော်ရဲနိုင်. မှစတင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့သော6နှာရီ. တွင် + ဥယျာဉ်မယ်♥+♥နေမင်းချစ်သူ မှ နောက်ဆုံးပြန်လည် ပြောကြားခဲ့သည် 1 ခါပြန်လည်ပြောဆိုထားသည်
ကျော်ရဲနိုင်. မှစတင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့သော6နှာရီ. တွင် + ဥယျာဉ်မယ်♥+♥နေမင်းချစ်သူ မှ နောက်ဆုံးပြန်လည် ပြောကြားခဲ့သည်2ခါပြန်လည်ပြောဆိုထားသည်
တနင်္လာနေ တွင် ကျော်ရဲနိုင် မှစတင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်0ခါပြန်လည်ပြောဆိုထားသည်
Crush by Shwe Htoo
ဇင်မင်းထက်. မှစတင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး တနင်္လာနေ. တွင် ကိုကိုအေး မှ နောက်ဆုံးပြန်လည် ပြောကြားခဲ့သည်3ခါပြန်လည်ပြောဆိုထားသည်
×××=ဝေယံဖြိုး=×××. မှစတင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး Aug 11. တွင် +!! ★♥Sky Heart♥ ★!!+ မှ နောက်ဆုံးပြန်လည် ပြောကြားခဲ့သည်4ခါပြန်လည်ပြောဆိုထားသည်
Ingyinh May_1 ×××=ဝေယံဖြိုး=××× တင်သွင်းခဲ့သည်0မှတ်ချက်
တို့နှစ်ယောက် - ပူစူး ( IMP ) +တူးတူး4+ တင်သွင်းခဲ့သည်0မှတ်ချက်
ပလက်ဖောင်းရှိုး +တူးတူး4+ တင်သွင်းခဲ့သည်0မှတ်ချက်
Amay Aye Yate daddy paw တင်သွင်းခဲ့သည် 1 မှတ်ချက်
Zay Yar O Ye Lwan Tay Sai Saing Maw daddy paw တင်သွင်းခဲ့သည်0မှတ်ချက်
ingulimarla chit thar daddy paw တင်သွင်းခဲ့သည်0မှတ်ချက်
thabar wa yin thway nge daddy paw တင်သွင်းခဲ့သည်0မှတ်ချက်
Asate yay apyay ne pone daddy paw တင်သွင်းခဲ့သည်0မှတ်ချက်
Oh Myit Tar shin(ok) daddy paw တင်သွင်းခဲ့သည်0မှတ်ချက်
kyoe mae chi tine(K) daddy paw တင်သွင်းခဲ့သည်0မှတ်ချက်
11 Sai Hti Sai Hlwan Moe - Pyauk Sone Nay Tet Nate Ban Bon.flv daddy paw တင်သွင်းခဲ့သည် 1 မှတ်ချက်
Myanmar Song Ta Yar Har Ta Yar Bar Bae Bo Phyu daddy paw တင်သွင်းခဲ့သည်0မှတ်ချက်
ထိပ်သီးလုပ်ဆောင်ချက်များ · လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံး ဖိုးလပြည့် သည် +!!♥♥lapyae♥♥ !!+ ဘလော့ပို့(စ်) လူဆိုတာ ဘယ်ကစ အထီး၊ အမ ဘယ်ကစ ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ကို ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့သည်လွန်ခဲ့သောတနာရီဖိုးလပြည့် သည် အလွမ်း ခ ဘလော့ပို့(စ်) ဆုတောင်းကို ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့သည်လွန်ခဲ့သောတနာရီဖိုးလပြည့် သည် thwetarthu528@gmail.com အတွက်မှတ်ချက် အမှတ်တရရေးခဲ့သည်"လာလည်တယ်နော်ယမင်းလေး
"လွန်ခဲ့သော2နှာရီthwetarthu528@gmail.com, myitminmghero@gmail.com, DJ ,4မြောက်များစွာတို့ နတ်သမီးဥယျာဉ် တွင်အဖွဲ့ဝင်ခဲ့ပါပြီလွန်ခဲ့သော2နှာရီကိုကိုအေး သည် မင်းယောင်္ကျား ၏ဘလော့ပို့(စ်) တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး သဘာဝဓလေ့ ဓာတ်ပုံ များတွင်မှတ်ချက် ရေးသားခဲ့ပါသည်"အားပေးခဲ့ပါတယ်"လွန်ခဲ့သော2နှာရီကိုကိုအေး သည် Khanth Gyii ၏ဘလော့ပို့(စ်) သူငယ်ချင်းတွင်မှတ်ချက် ရေးသားခဲ့ပါသည်"ဟုတ်ပ...တယ်ယင်းေ၇"လွန်ခဲ့သော3နှာရီzawhtetoo သည် + !! ♥♥(ကြယ်ကလေး♥♥ကလေးလေး)♥♥ ၏အဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင်ခဲ့ပါပြီmp3သီချင်းများဒေါင်းရန်သီချင်းနှစ်သက်သူများအလွယ်တကူသီချင်းများရယူစေရန် အပြည့်အစုံကြည့်ရန်လွန်ခဲ့သော3နှာရီ 53
DJ သည် သူ၏အိမ်အားြ ပင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့သော4နှာရီ နောက်ထပ် RSS
ခက်ကိုကို ... ယောမြေ
+ !၉၆၉သစ်စာတော်+ !!
+ !!mgmg+ !!
+ Sai Lay (Drunkard Master) +
လက်ဆောင်ပေးရန် ချက်ခန်းတာဝန်ခံ +! may la won !+အလင်းချစ်သူ
လက်ဆောင်ပေးရန် august rush
လက်ဆောင်ပေးရန် Moe lay
လက်ဆောင်ပေးရန် © 2014 Created by + !! ♥♥(ကြယ်ကလေး♥♥ကလေးလေး)♥♥. Powered by